တရုတ် MHG Series- Aluminate အခြေခံပြီးစက်ရုံနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Minhui အလင်းအား
MH စီးရီး photoluminescent ဆိုးဆေးအလင်းအဝါရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်အစိမ်းရောင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုတင်ပြပေးသော alkaline များမြေကြီးတပြင် aluminate, ကနေဖန်ဆင်းတော်နှင့်အဖြူနှင့်အဘယ်သူ၏တောက်ပသောအရောင်အဆင်းများပါဝင်သည်နေကြသည်; အပြာ-ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းအဝါရောင်အစိမ်းရောင် ...
FOB စျေးနှုန်း: 10-40USD / kg
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 30tons
MH စီးရီး photoluminescent ဆိုးဆေးအလင်းအဝါရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်အစိမ်းရောင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုတင်ပြပေးသော alkaline များမြေကြီးတပြင် aluminate, ကနေဖန်ဆင်းတော်နှင့်အဖြူနှင့်အဘယ်သူ၏တောက်ပသောအရောင်အဆင်းများပါဝင်သည်နေကြသည်; အဝါရောင်အစိမ်းရောင်အပြာရောင်-အစိမ်း, အပြာနှင့်ခရမ်းရောင်။ ဤသည် photoluminescent ခြယ်ပစ္စည်းအကွာအဝေးမြင့်မားသောတောက်ပနှင့်ရှည်လျားသော afterglow ပါရှိပါတယ်။ လောလောဆယ်ဒီအကွာအဝေးလျှောက်လွှာများအများဆုံးကျယ်ပြန့်အတိုင်းအတာရှိပြီးအလင်းကိုအောင်မြင်ရန် Coates, စီဘီ, သုတ်ဆေး, ပလတ်စတစ်, ပုံနှိပ်ငါးပိ, ကြွေထည်, ဖန်, အမျှင်, နှင့်အခြားပွင့်လင်းလတ် (သို့သော်ရေနံတ္ထုများသာကန့်သတ်) တွင်သုံးနိုငျ အလတ်စား၏ဓါတ်ရောင်ခြည်ရည်ရွယ်ချက်။
MHG အဝါရောင်-အစိမ်း, အပြာစိမ်း MHB, MHSB ကောင်းကင်ပြာပြာရောင်, MHP ခရမ်းရောင်: MH စီးရီး photoluminescent ခြယ်ပစ္စည်းတောက်ပအရောင်အရသိရသည်လေးအမျိုးအစားများရှိနေပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမျိုးအစားအရည်အသွေးနှင့်အမှုန်အရွယ်အစားနှင့်အညီအများအပြားမော်ဒယ်များရှိပါတယ်။
MHG အဝါရောင်အစိမ်းရောင် photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ
MHG အဝါရောင်အစိမ်းရောင် photoluminescent ဆိုးဆေးအလင်းအဝါရောင်နှင့်အဖြူရောင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကိုတင်ပြခြင်းနှင့်အဘယ်သူ၏တောက်ပသောအရောင်အဆင်းအဝါရောင် green.MHG အဝါရောင်အစိမ်းရောင် photoluminescent ခြယ်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာများအများဆုံးကျယ်ပြန့်အတိုင်းအတာရှိတယ်သော alkaline များညျမွကွေီးပျေါစထရွန်တီ aluminate မှထားကြပါတယ်။ ဤသည်အကွာအဝေးမြင့်မားသောတောက်ပနှင့်ရှည်လျားသော afterglow ပါရှိပါတယ်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်မီး-တိုက်ခိုက်နေဘေးကင်းလုံခြုံမှုအရိပ်လက္ခဏာ, ငါးဖမ်းကိရိယာတခု, craftworks နှင့်လက်ဆောင်တွေမှလျှောက်ထားခြင်း, ဒါပေါ်မှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အသီးအနှံကုဒ်: MHG ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အစိုင်အခဲအမှုန့်
ဓာတုအမည်: ရှားပါးမြေကြီးနှင့်တကွ doped စထရွန်တီ aluminate PH သည်: 10 ~ 12
မော်လီကျူးပုံသေနည်း: SrAl2O4 : Eu + 2, Dy +3သိပ်သည်းဆ: 3.4 g / cm3
အဘယ်သူမျှမ CAS .: 12004-37-4 စိတ်လှုပ်ရှားလှိုင်းအလျား: 240 ~ 440nm
နေ့ခင်းဘက်အရောင်: အလင်းကိုအဝါရောင် emitting လှိုင်းအလျား: 520nm
ရဲအရောင်: အဝါရောင်အစိမ်းရောင် HS ကုဒ်: 3206500
MHG စီးရီး Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူစာရင်း
> 12 နာရီ
1.Luminance စမ်းသပ်အခြေအနေများ: စိတ်လှုပ်ရှား၏ 10min များအတွက် 1000LX တောက်ပ flux သိပ်သည်းဆမှာ D65 စံအလင်းရင်းမြစ်။
စတာတွေစတာတွေ 2. မှုန်အရွယ်အစား B ကိုလောင်းများ၏ထုတ်လုပ်မှုယာဉ်ဘို့အကြံပြုသည်, မှို reverse, မှုန်အရွယ်အစား C နှင့် D ကိုပုံနှိပ်ခြင်း, အပေါ်ယံပိုင်းအဘို့အကြံပြုကြသည်, ဆေးထိုး, မှုန်အရွယ်အစား, E နှင့် F ပုံနှိပ်ခြင်း, wiredrawing, etc ဘို့အကြံပြုကြသည်
ယခင်: MHB Series- Aluminate အခြေပြု
နောက်တစ်ခု: MHP Series- Aluminate အခြေပြု
အစုလိုက် Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ Powder
Photoluminescent Paint ဆေးရောင်စုံစက္ကူ
Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ Msds
Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ Paint
Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ Powder
ရေကိုခံနိုင်ရည် Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ
ရေကိုအခြေခံပြီး Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ
အဝါရောင်အစိမ်းရောင် Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ
သွပ်ဆာလ်ဖိုက်မှရရှိပါသည် Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ
MHP Series- Aluminate အခြေပြု
MHB Series- Aluminate အခြေပြု
MHSB Series- Aluminate အခြေပြု
Photoluminescent အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Exit ကိုသင်္ကေတပြ, သွပ်ဆာလ်ဖိုက်မှရရှိပါသည် Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ, Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူအလင်းအား, Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ•အထည်အလိပ်သည် , Photoluminescent ဆေးရောင်စုံစက္ကူ Msds,